Kitra Ambatondrazaka: tompondakan’ny D2 Ambakireny-Betsiboka - ewa.mg
Foot - News - Sport - Kitra Ambatondrazaka: tompondakan’ny D2 Ambakireny-Betsiboka
Ny fitiavam-baolina, tsy mahalavi-tany! Tompondaka diviziona faharoan’ny seksion’ny baolina kitran’Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro, tamin’ity taom-pilalaovana 2018 ity, ny ekipan’ny Zook Massik-n’Ambakireny ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna, faritra Betsiboka. Resiny teo amin’ny fandakana ny “tirs au but”, 5 no ho 4, teo amin’ny famaranana, ny ekipan’ny Marianina-Ambatondrazaka II. Nisaraka ady sahala 1 no ho 1 ny roa tonta tao anatin’ny 90 mn nilalaovana sy taorian’ny fanalavam-potoana 15 mn indroa miditra. Niady ny baolina ary ny Zook Massic no nampiditra ny baolina voalohany, saingy nosahalain’ny tompon-tanana izany avy eo.
Raha tsiahivina, 120 km avy eo Ambatondrazaka ny misy an’Ambakireny, any atsimo-andrefan’Amparafaravola. “Manao latsakemboka izahay “staff”, na mivarotra tee-shirt na mikarakara alim-pandihizana ho fidiram-bolan’ny ekipa”, hoy ny Dr Mamy Harijaona, filohan’ny ekipa. Lavitra ary mihodina be sy ratsy lalana avy eo Ambakireny mankany Tsaratanàna, foiben’ny distrika misy ny Zook Massic ka aleony milalao aty Ambatondrazaka, lalana vita tara.
L’article Kitra Ambatondrazaka: tompondakan’ny D2 Ambakireny-Betsiboka a été récupéré chez Newsmada.
Ambatondrazaka - Kitra
Basket - News - Sport - Delire Madagascar
« TOURNOI JUMP »: Niverina indray
2002 no nisy farany ny fifaninana « « Tournoi Jump » izay hifaninanan’ny mpiantra eny amin’ny sekoly kolejy sy lisea amin’ny lalao basikety. Niverina indray izany tamin’ity taona ity noho ny fahatsapan’ny fikambanana Jump Basketball fa ilaina ny fitaizana ireo tanora amin’ny sehatry ny fanatanjahantena. Roa andro no anaovana ny fifaninana ka hanomboka amin’ny 11 atondro ny andron’ny sabotsy 13 Aprily 2019 ny fifaninana ka hifarana ny Alahady 14 Aprily 2019. Ny maraina mialoha an’io kosa anefa dia hisy ny hetsika « sport et loisir » karakarain’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena hitaizana ny tanora ahitana lalao ping pong, tenisy ambony latabatra, zomba ary fampilalaovana ny ankizy. Tsy hisy ny vidim-pidirana amin’io maraina io. Tanjona amin’ity hetsika ity ny hanentanana ny tanora sy fitaizana amin’ny fandrindram-piterahana. Eo amin’ny sehatry ny fifaninana « Tournoi Jump » kosa indray dia sekoly 16 no mandray an-jara ka 12 no avy eto Antananarivo avokoa, efatra avy any amin’ny faritra toa an’i kolejy St Gabriel mahajanga, kolejy David Johns Toamasina, St François Xavier Fianarantsoa ary St Joseph Antsirabe. « Betsaka no maniry ny handray an-jara kanefa noferana izany satria tsy ho vita ao anatin’ny roa andro ny fifaninana. Amin’ny manaraka kosa anefa dia ho ezahina ny hampitombo izany. Tanora latsiky ny 18 taona no afaka milalao amin’ity fifaninana ity », hoy ny filoha mpanorina ny fikambanana Jump Basketball, Arivelo Hajaniaina Vévé. Eo amin’ny fizotrany lalao dia 10 minitra miditra indroa amin’ny fifanintsanana fa any amin’ny manasa-dalana sy ny famaranana kosa no 8 minitra inefatra. Marihana fa eny anelanelan’ny lalaon’ireo tanora ireo dia hisy ny fandraisana an-jaran’ireo nilalao tany amin’ny taona 1995 ka hatramin’ny taona 2002. Ankoatra izay dia hisy lalao fanomanan-tena ho an’ireo ekipam-pirenena lahy sy vavy hiatrika ny lalaon’ny nosy amin’ity taona ity. Hifanandrina amin’izy ireo amin’izany ny ekipan’ny « reste du monde ». Marihana fa tamin’ny taona 1995 no niforina ny fikambanana. Nirina R. Cet article « TOURNOI JUMP »: Niverina indray est apparu en premier sur déliremadagascar.
Nifarana, omaly alahady tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny andiany faharoa, niadiana ny tompondakan’ny ranomasimbe Indianina “Top 6 Aroi 2019”, taranja rugby. Norombahin’ny FTM Manjakaray ny amboara tamin’ity. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa mazava 47 no ho 24, ny Cosfa.Ekipa efa diso mifankalala tsara ny roa tonta. Tsy nihambahamba fa nampiseho avy hatrany ny fahaiza-manaony sy ny hakingany teo am-panombohana ny FTM, notarihin-dry Lahatra sy i Koroka. Nahitam-bokany izany satria nisesy ny baolina nentin-tanana vitan’izy ireo, efa nitarihany tamin’ny isa 14 no ho 0. Taorian’io vao nahatsara “hors jeu” iray ny Bebaoty, tamin’ny alalan’ny baolina voatsaran’i Gougou, ka nahatonga ny isa ho 14 no ho 3.Nanomboka teo, nifoha tamin’ny torimasony ny Miaramila ka nanomboka nanafika, saingy tsy nanaiky lembenana ihany koa ny boaikelin’ny Manjakaray. Na izany aza, samy nahafaty baolina avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Nitarika hatrany anefa ny FTM Manjakaray. 24 no ho 14 ny isa nentin’ny roa tonta niala sasatra, tamin’ity.Teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, niezaka nanohitra ry Mael sy ny namany, ho an’ny Bebaoty, saingy efa tsara fiarovantena ny Manjakaray ka tsy tafavoaka mihitsy izy ireo. Vokany, nihanahazo vahana ny FTM ka nisesy indray ireo baolina nentin-tanana. Nitarika tamin’ny isa 47 no ho 17 ry zalahy. Efa tany amin’ny fiafaran’ny fotoana vao nahatonga baolina nentin-tanana ny Cosfa, izay tsy ampy nisongonana ny FTM intsony izany.Mbola hodinihina ny firenena hampiantrano ny andiany fahatelo, sy ny fomba hanatsarana ny lalao satria mety hisy sokajy hafa hampidirina hifaninana amin’ity “Aroi” ity, araka fivoriana niarahana tamin’ny federasiona frantsay, omaly. TompondakaL’article Rugby – «Top 6 Aroi 2019»: voahosotra ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny FTM Manjakaray a été récupéré chez Newsmada.
BASKET-BALL «CACC 2018» :: Nisedra faharesena roa sahady ny MB2All
Ratsy fanombohana. Niondrika teo anatrehan’ny klioban’i Firstbank avy any Nizeria, tamin’ny isa 74 noho 70, ny ekipa solontenan’i Madagasikara any amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika ho an’ireo klioba tompondaka (CACC) tanterahina any Maputo, Mozambika, nandritra ny andro voalohany. Taorian’io dia mbola resy tamin’ny alalan’ny isa 75 noho 51, indray izy ireo nanoloana ny INSS avy any Côte d’Ivoire, nandritra ny andro faharoa. “Tena azo heverina ho lenta hafa mihitsy ity fifaninanana kaontinantaly ity. Mbola voatantanay aloha ireo ampahefa-potoana roa nandritra ny fihaonana tamin’ny Firstbank, laharana fahatelo tamin’ny fifaninanana teo aloha. Niezaka izahay nanatsara hatrany izahay nony avy teo”, hoy i Ndranto Rakotonanahary, mpanazatra ny MB2All. Mbola hifanandrina amin’ny ekipan’ny KPA avy any Kenya isika, rahampitso, mialoha ny hihaonana amin’ny Lakers avy any Zimbaboe amin’ny alarobia ho avy izao. L’article BASKET-BALL «CACC 2018» :: Nisedra faharesena roa sahady ny MB2All est apparu en premier sur AoRaha.
Tenisy ambony latabatra: nandrombaka medaly 2 ny Malagasy
Taranja anisan’ny nampamiratra ny solontena Malagasy, miatrika ny lalaon’ny nosy aty Maorisy, ny taranja tenisy ambony latabatra. Medaly volafotsy iray sy alimo iray hatreto no norombahan’ny Malagasy, teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona lahy sy vavy. Niditra an-tsehatra ny alakamisy 20 jolay lasa teo ireo atleta Malagasy, teo amin’ny sokajy isam-bondrona, tao amin’ny toeram-piofanana nasionaly ny tenisy ambony latabatra, tao Beau Bassin Maorisy. Ny ekipan’ny Maldives no nifanandrina voalohany tamin’ny ekipa lehilahy Malagasy, izay nolavointsika tamin’ny isa 3 noho 0. Mbola namiratra ihany koa ireto mpiangaly ny tenisy ambony latabatra Malagasy, lehilahy, nanoloana an-dry zareo Maorisiana, mpampiantrano, ny alahady teo.Teo amin’ny sokajy vehivavy kosa, niady ny laharana fahatelo nanoloana ny Renioney ihany koa, omaly, ny mpilalao Malagasy, sokajy vehivavy. Tamin’izany no nandavoantsika ireto mpilalaon’ny La Réunion ireto, tamin’ny isa 3 noho 2. Mi.RazL’article Tenisy ambony latabatra: nandrombaka medaly 2 ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Mitaraina ny tompona tanimbary eny Andraharo noho ny fanotofana tany ataon’olon-tsotra. Efa nisy ny fitoriana nataon’izy ireo, ny 24 jona lasa teo, ka nisy ny didy fanajanonana ny asa, izay nanomezana azy ireo fe-potoana 48 ora. Gaga anefa ny tompon’ny tanimbary rehefa nandalo teny an-toerana ny sabotsy teo fa mbola manohy miasa ihany ireo olona ireo. Nilaza ireto farany fa nahazo alalana hanao izany. L’article Fanotofana tany est apparu en premier sur AoRaha.